Nagarik News - कसरी चिन्ने केटा र केटी?
कसरी चिन्ने केटा र केटी?
बिहीबार १७ असोज, २०७०
केटाको पक्षबाट केटी हेर्न गए। अचेल बिहे छिन्न जाँदाको लस्कर जन्तीको जत्रै हुन्छ। छोरीमान्छे र छोरामान्छे सराबरी देखिन्छन्। अझै कुरा गर्ने हो भने बिहेबारीका अन्तिम निर्णायक–शक्ति भनेकै वरपक्षका महिलाहरू हुन्। दिदी, बहिनी, फुपू, भाउजू, काकी, माइजू आदि। वधूपक्षले वरपक्षलाई केटी देखाए। टपक्क टाँसिएको पाइँट, सट, कोट र टाईसमेत लाएकी र थाई कट गरेकी हुनाले ती नानीलाई दाइ अथवा भाइ पनि भन्न मिल्ने नै थियो। अधिकृत तहको स्थायी जागिर खाएकी। जागिर पनि सरकारी। मन पराएर हेर्दा रूपरङ्ग चन्द्रमुखी नै भनिदिए हुने!
बिहा छिन्न र जन्त जान भनेपछि अचेलका महिला मरिहत्ते गर्छन्।
अत्याधुनिक केटी, सबैले मन पराए, सह्राउनुसम्म सह्राए। टीकाटालो सकियो। केटापक्षका सबै जना घर फर्किए। बिच बाटामा आइपुगेपछि एउटी महिला–सदस्यले लाजै नमानी केटाको कानमा खुसुक्क सुनाइन्–“लवाइसवाइ हेर्दा र नाउँ सुन्दा त हामीले कुरो छिनेको मान्छे केटोजस्तो लाग्यो। तिनको नाम रहेछ …सुमन शर्मा'!”
केटी थिइन्, बाबुको अनुहार परेकी। वेशभूषा पूरै केटाको, नाउँ पनि केटाको, रूप पनि केटाको! दाह्रीजुँगा जडिदिँदा दाइ भन्न मिल्ने! केटो तर्सियो। केटी हेर्न गइसकेपछि केटो हो कि केटी हो जान्नका लागि तिनको लैङ्गिक परिचय दिने अङ्ग पो हेर्नुपर्ने! बिचरो टोहोलाउन थाल्यो।
पहिले–पहिलेको नेपाली भाषामा स्त्रीलिङ्गी व्यक्तिका लागि थर पनि स्त्रीलिङ्गकै हुन्थ्यो—दमिनी, कमिनी, दाहाल्नी, सर्किनी, मगर्नी, बाहुनी, छेत्रिनी, गुर्सिनी/गुरुङसेनी, पण्डित्नी, डाक्टर्नी, माष्टर्नी आदि। अचेल यी शब्दहरू उभयलिङ्गी छन्।
केही दिनअगाडि एउटा लेख पढेको थिएँ। महिला साहित्यकारलाई पुरुष र पुरुष साहित्यकारलाई महिला बनाएर तदनुरूप क्रियापदको प्रयोग गरिएछ! सुद्धी हराएका बूढा समालोचकहरूले नाम मात्रै हेरेर समालोचना गरेछन्। क्रियापद चाहिँ स्त्रीलिङ्गी नै राख्नुपर्ने भएपछि नाम पनि त राखिदिएको भए कसको के जान्थ्यो? हरिकुमारी, राममाया, शिवमैयाँ, कृष्णकला, इन्द्रनानी आदि सबै स्त्रीलिङ्गी नाम हुन्। हरि, राम, शिव, कृष्ण, इन्द्र आदि मात्रै पुलिङ्गी हुन्। यस्तै गरी लक्ष्मीप्रसाद, रमानाथ, पार्वतीकुमार, देवीदत्त, कालीप्रसाद, गौरीनाथ, सिद्धिलाल, गिरिजाप्रसाद, उमादास, चण्डीबहादुर आदि स्त्रीलिङ्गी नाम हुन्। लक्ष्मी, रमा, पार्वती, देवी, काली, गौरी, सिद्ध, गिरिजा, उमा, चण्डी मात्रै पुलिङ्गी नाम हुन्। यसै उदाहरणलाई मनन गरी नामको पछाडि पुलिङ्गवाचक वा स्त्रीलिङ्गवाचक शब्द जोड्नका लागि सुझाउनु आवश्यक देखियो। नत्र, केटा अथवा केटी हेर्न जाँदा उनीहरूको यौनाङ्ग नहेरी नहुने अवस्था आउन सक्छ। बिहा छिनेर घर फर्किसकेको केटो केटीको लैङ्गिक पहिचान दिने अङ्गको परीक्षण गर्न पुनः फर्किएछ।
काली दमिनीदेखि रूपासम्म
ललितपुरको झम्सिखेलस्थित मोक्ष रेस्टुरेन्टमा सोमवार दिया मास्के आँखामा कालो चस्मा, बुट्टेदार सर्ट्स र कालो पारदर्शी लेगिंग्समा प्रकट भइन्। 'म काली दमिनीलाई भेट्न आएको!' उनको गेटअप हेरेर ठट्यौलो शैलीमा मैले भनेँ।...
कार्यक्रम सञ्चालिकाबाट लोकगायनमा प्रवेश गरेकी सुनिता दुलालले अघिल्लो हप्ता मात्रै चौधौं गीति संग्रह 'मायालाई के दिऊँ म' बजारमा ल्याएकी छिन्। मायाप्रेमका रमाइला गीत गाउने उनीसँग उनको प्रेमजीवनमै केन्द्रित भएर धनबहादुर...
''तीज आयो भन्छिन्, पत्नी पैसा गन्छिन् मै अभागी जोइटिङ्ग्रे कसको चोर्न जाऊँ?” तीज मनाउने पालो पर्खिरहेका एक हूल भट्टीभक्त पुरुषहरू ताली बजाउँदै यस्तै गाएर बसिरहेका थिए। बिसुरमा एउटाले भन्यो– 'उहिले–उहिले...
फरक स्वर, फरक विचार
फरक स्वरकै कारण फरक परिचय बनाएकी गायिका आस्था राउतले काम पनि त्यस्तै गरिन्। सामान्यतः नयाँ गायिकालाई सुरुमा कसैले नपत्याउने भएकाले उनीहरू पहिले आफ्नै एल्बम बजारमा ल्याउने गर्छन्। तर, आस्थाले उल्टो...
यो देश श्वेतभैरवको मुखबाट निस्कनेलुँ हिटी छोप्न चलिरहेको एउटा प्रतिस्पर्धाआँशु र अट्टहासको एउटा लाखे नाच जहाँ म जन्मनु नैक्रूरताहरूविरुद्ध एउटा प्रतिकार थियो।
फिल्म 'दुलही'मा घुम्टो ओढेर फिल्म क्षेत्रमा भित्रिएकी सुमिना घिमिरेको पहिरन उतार्ने क्रम जारी छ। यसअघि फिल्म 'नाइन ओ क्लक'मा बोल्ड रूपमा प्रस्तुत भएकी उनी फिल्म 'लभ फरेभर' मा झन् बोल्ड...
बद्री सर, बद्रीजी र ओई बद्री
बद्री पंगेनी टाठाबाठा लोकगायक मानिन्छन्। लोकगीत लेखन र गायनमा उत्तिकै क्षमता भएका उनले लेखेका/गाएका 'ससुरालीमा', 'पिएन क्याम्पस', 'ढल्के पीपल पलायो' लगायत लोकदोहोरी गीत चर्चित छन्। उनका 'अझै लोकतन्त्र आको छैन...